Lenovo Oo Shaacisay Sumadeeda Cusub Ee Mobile Lemeng | Androidsis
Dhowr maalmood ka hor Vivo ayaa ku dhawaaqday sub-brand cusub IQOO. Wax yar ayaa ka gudbay illaa iyo nooc cusub oo ku saabsan Android uu ku dhawaaqayo astaanteeda cusub. Xaaladdan oo kale, waa shirkadda Lenovo ee ku dhawaaqday astaanteeda cusub. Waxay ku saabsan tahay Lemeng Mobile, oo si rasmi ah loo shaaciyey. Noocan cusub ee soo-saaraha ayaa diirada saari doona aaladaha kala duwan ee warbaahinta, sida shirkaddu ku sheegtay qoraalka hordhaca ah ee xaqiijinaya jiritaankiisa.
Sidaad horeba u ogayd, Lenovo sidoo kale waxay leedahay Motorola. Marka Lemeng Mobile wuxuu noqonayaa sumadda saddexaad ee soo saaraha Shiinaha. In kasta oo summaddani ay beegsanayso qayb suuq oo aad u kala duwan. Sida ilaa hada la arkay.
In kasta oo dareenkan la qabo, Motorola waxaa loola dhaqmay waqti kasta sidii astaan ​​madax-bannaan. Ma naqaano haddii isla xeeladdaas lala raaci doono Lemeng Mobile. Xaqiiqdu waxay tahay in runtii aysan ahayn nooc cusub, laakiin taasi waxay ahayd sanado badan iyadoon la isticmaalin. Tan iyo waagii hore, moodooyinka ku jira noocani waxay diiradda saareen codka iyo muusikada.
Sidaa darteed, waxaa la tilmaamayaa in Lenovo uu ilaalin doono istiraatiijiyaddan Lemeng Mobile isla markaana la bilaabi doono moodello diiradda lagu saarayo codka ama multimedia ku dhex jira. Iyadoo tani ay tahay wax in weli lama xaqiijin si rasmi ah. Dabcan, waxay noqon laheyd sharad xiiso leh waxayna ku lahaan kartaa suuqa.
Fikradda ayaa ah in sumaddan cusub ayaa ka duwanaan doonta noocyada ugu muhiimsan ee Lenovo. Taasi badanaa waa fikradda leh noocyada labaad. Waqtigaan la joogo waxba kama ogin goorta taleefannada casriga ah ee ugu horreeya Lemeng Mobile ay imaan doonaan dukaamada. Waqti sannadkan waa inay noqotaa.
Waxaan si gaar ah uga fiirsan doonnaa qorshayaasha Lenovo leh sumaddan. Waxaan aragnaa imisa nooc oo ku saabsan Android oo abuuraya sumad labaad. Markaa wax lala yaabo maaha haddii mid cusub dhowaan lagu dhawaaqo. Maxaad u malaynaysaa inay Lemeng Mobile bilaabi doonto?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Lemeng Mobile: Nooca Cusub ee Lenovo